OTU ESI EME KA OZI MGBASA OZI VKONTAKTE - VKONTAKTE - 2019
Kwado maka ozi ozi maka VKontakte
Ọtụtụ ndị ọrụ nke netwọk mmekọrịta bụ VKontakte chere nsogbu dị otú ahụ ihu dị ka mkparịta ụka efu na ngalaba ahụ "Ozi". A na-edozi ụdị nsogbu niile na nsogbu dị otú ahụ site na mmejuputa atumatu ndị a kọwara n'isiokwu a.
Chọọ mkparịta ụka VK
Chọọnụ maka mkparịta ụka na ọtụtụ ndị so na sistemụ VC na ikekwe ụzọ ole na ole. Tụkwasị na nke ahụ, a ga-ezigarịrị akaụntụ gị na mkparịta ụka nke ị debanyere aka na ya, mana maka ihe kpatara ya ahapụla ha.
Hụkwa: Otu esi emepụta ma hapụ mkparịta ụka VK
Ọ bụrụ na ewepụrụ gị na mkparịta ụka ahụ, mgbe ịchọtachara ya ị gaghị enwe ike ide ma ọ bụ laghachi ebe ahụ. Ọzọkwa, n'ihi ikpochapụ ọdịnaya nke mkparịta ụka ahụ, a gaghị egosikwa ngwa ngwa n'oge.
Hụkwa: Otu esi ewepu mmadụ site na mkparịta ụka VK
Tinyere ihe ndị ọzọ, ọ dị mkpa ịmara na ọ bụrụgodị na ehichapụ mkparịta ụka dị otú a na-ehichapụ n'oge gara aga, ọ ka nwere ike ịnweta. Otú ọ dị, buru n'uche na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke mkparịta ụka maka oge dị otú a na-akwụsị mmepe ma na-atụba ndị ọrụ nke saịtị ahụ.
Usoro 1: Usoro Nchọta
Akuku a nke isiokwu a bu n'obi maka ndi oru ndi choro ighota mkparita uka n'etiti otutu akwukwo ozi ndi ozo. N'otu oge ahụ, ọ dịghị mkpa onye ị bụ nakwa n'ọnọdụ ị nọ na nchịkọta chọrọ, ya bụrụ "Ehichapụ" ma ọ bụ "Ekpe".
Mgbe ị na saịtị netwọk mmekọrịta, mepee ihu "Ozi".
Ugbu a na n'elu windo nọ n'ọrụ, chọta ubi "Chọọ".
Dejupụta ya dị ka aha nke mkparịta ụka achọrọ.
Ọtụtụ mgbe, aha ndị so na ya nwere ike itinye aka na isiokwu nke mkparịta ụka a, ya mere kpachara anya.
Ụzọ ọzọ ị ga - esi nabata ya bụ nke a na - anabata, nke a na - ejupụta ụdị ọchụchọ ahụ dịka ọdịnaya nke mkparịta ụka ahụ.
Ọ kachasị mma iji okwu pụrụ iche na ebe kwesịrị ekwesị dị ka ihe omume.
Ị nwere ike ịnwe ịchọta otu okwu ahụ na mkparịta ụka dị iche iche, nke, dị mwute ikwu, enweghị ike idozi.
Akụkụ a kọwapụtara nke omume dị iche iche maka ma ọ bụ ọkọlọtọ VKontakte ọhụrụ.
Nke a nwere ike mezue nyocha nke ọkọlọtọ search engine, iji chọta mkparịta ụka.
Usoro 2: Ogwe Ogwe Ihe
Taa, ọ bụ ihe kachasị dị irè na, dị mkpa, usoro mgbagwoju anya nke mkparịta ụka mkparịta ụka n'ime saịtị nke netwọk mmekọrịta na-atụle. N'otu oge ahụ, ọ bụrụ na ịnwere ike ịmekọrịta usoro a kọwakwuru, ị nwere ike ijide n'aka na mkparịta ụka ọ bụla ga-achọta.
A ga-arụ ọrụ iji mee ihe ọ bụla n'ime ihe nchọgharị ọgbara ọhụrụ site na ịbanye na VK tupu oge.
Biko mara na na nke a, ọ na-enye gị ohere iji rụọ ọrụ na ọtụtụ ọnụọgụgụ.
Ọ bụrụ na mkparịta ụka gị enwere otu mkparịta ụka, pịazie koodu ndị a n'ime ebe nkesa.
Ọ bụrụ na enwere mkparịta ụka abụọ maọbụ karịa, ị ga-agbanwe nọmba ahụ na njedebe nke URL ahụ.
im? sel = c2
im? sel = c3
im? sel = c4
Mgbe ị ruru njedebe nke ndepụta nke ozi ederede, usoro ahụ ga-eme ka ị degharịa na peeji nke dị na ngalaba ahụ. "Ozi".
Na mgbakwunye na nke dị n'elu, ị nwere ike ehulata iji jiri adreesị ọnụ.
Tinye koodu ntinye a n'igbe ntanetị nke ihe nchọgharị Ịntanetị.
Kpọmkwem, na nke a, na igodo nsoroụzọ nke mkparịta ụka na-emeghe, ị ga-eji nkwurịta okwu kwupụta gị site na nke mbụ rue nke iri.
Tụkwasị na nke a, ọ bụrụ na ị bụ onye so na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke mkparịta ụka, a ga-agbatịkwuo akara akwụkwọ ibe.
Dịka ị nwere ike ịhụ site na ihe atụ ahụ, emelitere adreesị ebe ị na-agbakwụnye ihe mgbagwoju ohuru tupu ihe odide ikpeazụ.
Ọ bụrụ na ịtọ nọmba nke dị oke elu karịa uru gara aga, mgbe ahụ, a ga-emeghe taabụ na pin ID nke a n'ebe a.
Ị nwere ike ịmalite ọchụchọ ahụ na njedebe dị anya, mana ịkwesịrị ịkewapụ nọmba mbụ site na nha nha anya site na ịmepụta.
imers = _c15_c16_c50
Anyị anaghị akwado ime URL nke meghere ihe karịrị otu narị taabụ n'otu oge. Nke a nwere ike iduga njehie saịtị.
Anyị na-atụ anya na n'oge ị na-amụ akwụkwọ, ị nwere ike ịme ihe ndị kachasị mkpa na nchọta maka mkparịta ụka, site na iji ebe ntanetị nke ihe nchọgharị Ịntanetị.
Usoro 3: Ngwaọrụ Mobile
Ọtụtụ ndị ọrụ nke akụ a na-ahọrọ iji ọrụ nke saịtị ahụ site na ngwa ngwa VKontakte ngwa ngwa. Ọ bụ n'ihi nke a ka mbipụta nke mkparịta ụka nyocha mgbe eji ngwaọrụ arụmọrụ aba uru.
Malite ngwa ntinye ngwa ngwa tinye, wee gaa "Ozi".
N'elu aka nri elu, chọta ma jiri iko akara ngosi.
Dejupụta igbe ederede nyere. "Chọọ", dabere na aha mkparịta ụka ma ọ bụ ọdịnaya ọ bụla pụrụ iche site na akụkọ ihe mere eme.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, jiri njikọ ahụ "Chọọ ozi naanị"ka usoro ahụ ghara ileghara ihe ọ bụla metụtara aha.
N'iburu na ị nwere nza ajụjụ yiri nke ahụ, ị ​​ga-enweta nsonaazụ ọchụchọ ahụ.
Na mgbakwunye na ntuziaka ndị bụ isi, ọ dị mkpa iburu n'obi na mgbe ị na-eji akara ngosi nke saịtị VKontakte, ị nwere ike iji njirimara ndị dị elu nke ọchụchọ nyocha. Na-ekwu okwu nke ọma, n'oge ọrụ nke VK site na ihe nchọgharị, ị nwere ike ịme ma usoro mbụ na nke abụọ na nke atọ.
Ụdị njirimara dị otú ahụ bụ n'ihi ohere ịnweta nke profaịlụ profaịlụ na ebe nkesa nke ihe nchọgharị weebụ.
Ugbu a, ọ bụrụ na ị ghọtara n'ụzọ zuru oke niile akụkụ ọ bụla nke ọchụchọ maka nkwurịta okwu na netwọk mmekọrịta, e nwere ike ịchọta isiokwu a zuru ezu.